Magaalada Baton Rouge ee gobalka Louisiana dalka Mareyakanka ayaa maalintii axada waxaa ka dhacday toogasho lagu dilay sadex askari oo katirsanaa Ciidanka booliiska Mareykanka halka tiro kalana lagu dhaawacay.
Weerarkan ayaa la sheegay in uu ka dambeeyay nin Madow ah oo magaciisa lagu sheegay Gavin Long oo ahaa 29 sano jir kasoo jeeda gobalka Missouri, waxa uuna ninkan kasoo horjeeday tacadiyada ciidanka booliiska u geestaan dadka Madowga ah.
Ninkan Weerarka geestay ayaa la sheegay in uu horey uga tirsanaa ciidamada Marineska dalka Mareykanka, waxa uuna ninkan si weyn uga careesnaa dilalka ay booliiska Cadaanka ah u geestaan dadka Madowga ah.
Gavin Long, ayaa horey u sheegay in Cunsuriyada booliiska Cadaanka ah ay ku hayaan dadka Madowga ah in ana lagu joojin karin banaan baxyo balse loo baahan yahay in dagaal lagala hortago booliiska Cadaanka ee tacadiyada ku haya .
Ninkan ayaa la sheegay in weerarka uu geestay uu kusoo beegay munaasabada maalinta dhalashadiisa uu galayay 29-sano, waxaana weerarka ninkan uu imaanayaa xili dhawaan nin kale oo Madow ah uu isna toogasho ku dilay askar katirsan booliiska Mareykanka.